‘किरात प्रदेश’ माग्नेलार्इ प्रचण्डले भने-साझा नाम खाेज्नु ! - Naya Patrika
‘किरात प्रदेश’ माग्नेलार्इ प्रचण्डले भने-साझा नाम खाेज्नु !
प्रदेश नम्बर १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्नुपर्ने माग उठेको छ । काठमाडाैँस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा आयोजक किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात राई संघले वाम गठबन्धनका प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदहरूलाई बधाई दिने कार्यक्रममा सो विषय उठान भएको हो । आयोजकले नै कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य प्रदेश १ लाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्नु रहेको बताएको थियो ।
सोही कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताका रुपमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश ६ ले जसरी सर्वसहमति कायम गरी नामाकरण गर्न अाग्रह गरे । उनले इतिहास , संस्कृति, भूगोल, जातिय बनोट आदीलाई ठीक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी साझा नाम खोज्नु पर्ने बताए । प्रचण्डले प्रदेशको नामाकरणका सवालमा जनताको भावना र इतिहासलाई विशेष जोड दिइने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रचण्डले प्रदेशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला केन्द्र सहजीरकणको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए । उनले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतक ऐतिहासीकरुपले धनी मानिएको प्रदेश १ बाट राष्ट्रले निकै ठूलो अपेक्षा राखेको पनि बताए । प्रचण्डले छेउमै रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतसँग देश र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न पनि आग्रह गरे । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बेला प्रदेशको नामांकन, राजधानीलगायतका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेकाले जनतालाई नै छाडेको प्रष्टिकरण दिए ।
फरक प्रसंगमा प्रचण्डले भोलि या पर्सीसम्ममा केन्द्रको सरकारको बिस्तारले पूर्णता पाउने खुलासा गरे । उनले सरकारले पूर्णता पाएपछि जनतामाझ गरिएका कबुल गरिएका स्थायीत्व विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरे । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कसैको पनि शिर निहुरिन नदिनेगरी काम गर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘तपाईहरुको माग हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले तपाईहरुको शिर निहुरिन नदिने गरी काम गर्नेछौँ ।’
सुर्खेतमा ‘टोल–टोलमा प्रहरी’ अभियान सुरू
पचास हजार बाख्रा पालक महिलालाई उछिन्दै ७० हजारको पुरस्कार जितिन् बाँकेकी बुद्धिले
वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन
मेराे कार्यकाल कति वर्ष ? (फाेटाेफिचर)
नेमारमाथिको ‘फाउल’ले बनायो रेकर्ड !
गृहमन्त्री थापाको सांसद पद ६ वर्ष, अर्थमन्त्रीको २ वर्ष मात्र
जर्मनी र ब्राजिलका समर्थक पहिलाे दिन नै दुःखी
केनको निर्णायक गोलमा इंग्ल्यान्ड विजयी
डा. देवकोटालाई श्रद्धाञ्जलि दिन बाँसबारी पुगे ओली
हेटौंडामा कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको रौनक